गोरखा भूकम्पपछि ५० हजारभन्दा धेरै परकम्प – E Kutumba
By ईकुटुम्ब Last updated Apr 26, 2021 0
बैशाख १३, २०७८ सोमबार ,२०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि ५० हजारभन्दा बढी परकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्प गएको ६ वर्षमा अहिलेसम्म सानाठूला गरी ५० हजारभन्दा धेरै परकम्प गएको छ । यो अवधिमा ५ सय ५२ पटक चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका परकम्प गएको केन्द्रका प्राविधिक नविन विकले जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखामा परकम्प गएको छ । यस्तै धादिङ, नुवाकोट, रसुवा तथा काठमाण्डाै उपत्यकामा केन्द्रबिन्दु भएका परकम्पको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
अब परकम्प आउने सम्भावना कति?
गोरखा भूकम्प र त्यसको परकम्पको अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारी भूकम्पका परकम्प अझै आइरहने बताउनुहुन्छ । चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका परकम्प पनि आइरहेकाले जोखिम क्षेत्रमा नागरिक सचेत रहनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । भूकम्प गएपछि चिरा परेको वा फुटेको रेखामा धेरै कम्पन भएको भूकम्पविद्ले बताएका छन् । विज्ञकाअनुसार भूकम्प गएकाले बेला सञ्चित भएको शक्ति कम्पन हुँदै निस्कनु नै परकम्प जानु हो । भौगोलिक बनावटका कारण पनि भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त देश हो ।
यसले गर्दा परकम्प आउने मात्र होइन जुनसुकै बेला पनि भूकम्प जान सक्ने भूकम्पविद्ले बताएका छन् । भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारी भन्नुहुन्छ-‘नेपालसहित पूरै हिमालयको क्षेत्रमा भएका देशहरु भूकम्पको जोखिममा छन् । विशेषगरी पश्चिम नेपालमा भूकम्पको जोखिम धेरै छ । नेपालको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा डेढ दुई सय वर्षमा भूकम्प गइरहे पनि पश्चिमी क्षेत्रमा सन् १५०५ पछि भूकम्प गएको पाइएको छैन । गोरखा भूकम्पको परकम्प अझै एक दशकसम्म आइरहन्छ।’
भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीकाअनुसार गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको परकम्प अझै १० वर्षसम्म आइरहने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएपछि भएका अध्ययनले एक दशकसम्म पनि यसको परकम्प आइरहने पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बिस्तारै परकम्प आउन कम भएको छ तर फेरि नआउने भन्ने होइन । भूकम्प गएपछि परेका दरार पुरानै अवस्थामा फर्किन अरु १० वर्ष लाग्छ’, अधिकारीले भन्नुभयो । गोरखा भूकम्पपछि भुइँचालो नगएका ठाउँमा पनि केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जान थालेका छन् । २०७२ सालभन्दा १५, २० वर्ष अघिसम्म काठमाण्डौमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प नगए पनि गोरखामा भूकम्प गएपछि परकम्प जान थालेको अधिकारीले बताउनुभयो । यसले गोरखा भूकम्पपछि भुइँचालो जाने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
मास्क नलगाउने १३ सय २५ जनालाई ‘होल्ड’
परीक्षार्थी अन्याैलमा, जिम्मेवार निकाय माैन ! पाल्पामा कार्यालयदेखी विद्यालय तहसम्म संक्रमित